जसपा विवाद आधिकारिक को ? : RajdhaniDaily.com sharethis
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन निश्चित भएस“गै अगामी रणनीति तय गर्न शीर्षनेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पार्टी एकता नगरी छु्टिने निष्कर्षमा पुगेपछि निर्वाचन आयोगले यस’bout फैसला भोलि सोमबार गर्दैछ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुई समूहमा विभाजित जसपा नेता मिल्नुभन्दा छुटिनु नै हितकर हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात अध्यक्ष यादव समूह पुनस्र्थापना पक्षमा उभियो भने अर्का अध्यक्ष ठाकुर समूह विघटन ‘सही हो’ भन्दै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने पक्षमा उभियो ।
जसपा नेता अजय गुप्ता पार्टीमा आधिकारिक निर्णय नगरी आ–आफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न खोजेपछि विभाजननजिक पुगेको बताउ“छन् । जनता, पार्टी तथा मुलुकका लागि एकजुट हुनुको विकल्प नभएको उनको जिकिर छ ।
‘ओली सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ?’ भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएपछि पार्टी नै दुई समूहमा विभाजित भयो ।
यसबीच एकपक्षले अर्कोलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही क्रम सुरु भयो । केही समयका लागि भए पनि ठाकुर समूह वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा ओली सरकारमा सहभागी भयो । यादव समूह प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग गर्दै आन्दोलनमा होमियो ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति एवं संसद्ीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न फैसला गरेपछि ओली पदमुक्त भए ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि बसेको गत ३ साउनको संसद् बैठकमा यादव समूहले मात्रै नभई ठाकुर समूहका सांसदले समेत देउवालाई विश्वासको मत दियो । विश्वासको मतस“गै दुबै समूह एउटै मोर्चामा उभिएपछि पार्टी एकताबद्ध हुने विश्वास गरिए पनि सम्भव भएन ।
जसपा नेता सत्यनारायण मण्डलले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउँने काम गर्दा पार्टीले उठाउँदै आएको मुद्दा ओझेल परेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारमा जाने कि नजाने ? भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर सामूहिक निर्णयका आधारमा गरेको भए पार्टीको अहिलेको अवस्था आउँदैन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, केही नेताको हतारको निर्णयका कारण पार्टी नै विभाजन हुनु दर्भाग्य हो ।’
जसपामा को बलियो ?
फुटनजिक पुगेको जसपाभित्र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तानातानमा परेका छन् । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादव समूह बलियो देखिन्छ ।
संसदीय दलमा बलियो ठाकुर समूह अहिले आएर कमजोर भएको छ । यादव समूह अहिले कार्यकारिणी समितिका साथै संसदीय दल दुबैतर्फ बहुमतसहित बलियो छ ।
स्रोतका अनुसार ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षमा ३२ र ठाकुर पक्षमा १८ सदस्यमात्रै छन् । एक सदस्य (राजकिशोर यादव) तटस्थ छन् । उनी अझै पार्टी एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यस्तै, संसदीय दलमा ३४ सांसद जसपासंग छ । एक निलम्बन र अर्को जेलमा छन् । ३२ सांसदमध्ये अहिले यादव पक्षमा १९ र ठाकुर पक्षमा १३ सांसद छन् । ओली सरकारमा सहभागी हुने दिनसम्म २० सांसद ठाकुरको पक्षमा रहेकोमा ७ सांसद साथ छोडेर यादव पक्षमा लागिसकेका छन् ।
ठाकुर–महतो पक्षमा रहेका सांसद प्रमोद साह, अमृता अग्रहरी, रेणुका गुरुङ, रानी मण्डल, नरमाया ढकाल, रुही नाजसहित यादव पक्षमा लागेका छन् ।
यसैगरी, पूर्वराजपाबाट जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका सात नेता यादव पक्षमा लागेपछि ठाकुर र महतो समूह कमजोर र यादव समूह बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । अहिले पनि कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सांसद तानातानमा रहेकाले गुट परिवर्तनक्रम जारी छ ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच १० वैशाख २०७७ मा रातारात पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकता भएको एक वर्ष नबित्दै पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा तिब्र विवाद सुरु भएको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारण रातारात घोषणा भएको जसपा ओलीकै कारण फुट्दै गरेको टिप्पणी जसपा नेताको छ ।
पार्टी एकतापश्चात ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति र पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बनेको थियो । पाँच सदस्य पदाधिकारीमा तीन संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई एकातर्फ र अर्कोतर्फ अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो छन् ।
के गर्दैछ आयोग ?
पार्टी विवाद चर्किएपछि आधिकारिताका लागि दुबै समूह निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । पहिलो पटक निर्वाचन आयोग पुग्दा दुबै समूहलाई आयोगले एकताबद्ध भएर अघि बढ्न भन्दै कुनै निर्णय गरेन । त्यसपछि दोस्रो पटक यादव समूहले पुनः आयोगमा पुगेर आधिकारिता दावी पेस ग-यो ।
उता, कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा रहेका ठाकुर समूहले यादव समूहका नेतालाई कारबाही गर्दै आफूखुसी कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गर्दै बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दावीसहित आयोगमा आधिकारिताका लागि दावी पेस ग-यो ।
अहिले निर्वाचन आयोगले जसपा एकताबखतकै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको छ । आयोगले पार्टी आधिकारिकता सम्बन्धमा जसपा एकता भएकै बखतको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ५१ जनालाई नै सनाखतका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
दुवै पक्षको बहसपछि आयोगले गत बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो । सनाखतका लागि ११ साउन बिहान ११ बजे नागरिकताको सक्कलसहित ५१ कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई उपस्थित हुन आयोगले भनेको नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए ।
निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता निरुपण गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगमा गत बिहीबार यादव र ठाकुर पक्षका कानुन व्यवासयीले बहस गरेका थिए ।
यादव पक्षले एकताताकाकै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई र अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षले पुनर्गठन गरिएको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको थियो । ठाकुर पक्षले आफूनिकट नेतालाई कार्यकारिणी समितिमा मनोनीत गर्दै आफूसँग बहुमत रहेको दाबी आयोगमा गरेको थियो ।
गत ३ साउनदेखि आयोग इजलासमा बहस भइरहेको थियो । बहसपछि ११ साउनमा दुवै पक्षका कार्यकारिणी सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको आयोग सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिए ।
ठाकुर समूह सर्वोच्चमा
यसैबीच, अध्यक्ष ठाकुर समूह आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्णय सुनाउन निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई नागरिकता परिचयपत्रको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन आदेश गरेपछि त्यसविरुद्ध ठाकुरले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । पार्टी आधिकारिकता विवादमा आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने देखेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
ठाकुरले शुक्रबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग र जसपा अध्यक्ष यादवविरुद्ध रिट दर्ता गराए पनि शुक्रबार नै अदालतले कुनै निर्णय गरेको छैन । अधिवक्ता प्रदिपकुमार पाठकलाई वारेस नियुक्तगरी ठाकुरले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पुरानो कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर ‘हेडकाउन्ट’का लागि बोलाएको निर्णय रोक्न ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
ठाकुरका तर्फबाट पाठकले शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले गर्न लागेको ‘हेडकाउण्ट’लाई रोक्न आदेश माग गरेका छन् ।
आधिकारिक को ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को धारा ४४ मा विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । जसअनुसार आयोगले कुनै दलमा विवाद भएमा सोही धारा अनुसार निर्णय गर्नेछ ।
ऐनको धारा ४४ को (६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समिति पदाधिकारी र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समिति पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।
राजनीति दलसम्बन्धीको यही ऐनअनुसार अहिले जसपामा यादव पक्षस“ग कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेकाले यादव समूहले नै आधिकारिता पाउनेछ । ठाकुर र महतो समूहले अर्को दल दर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आयोगले मुख्यत कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत रहेकाले यादव समूहले नै आधिकारिता पाउने भएकाले ठाकुर पक्ष आयोगको निर्णय रोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन
यसैबीच, अध्यक्ष यादव समूहको शनिबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले सोमबार आयोगमा आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सक्कल नागरिकतासहित आयोगमा उपस्थिति हुन अध्यक्ष यादवले निर्देशन दिएको नेता महेन्द्रराय यादवले बताए ।
शनिबारको बैठकमा ५१ मध्ये ३३ सदस्य सहभागी भएको दावी नेता यादवको छ । बैठकमा ठाकुर पक्षले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदन विषयमा छलफल भएको छ ।
त्यस्तै, बैठकमा संसदीय दलबाट पाारित संसदीय दलको विधान प्रस्तुत भएको उनले बताए । विधान अध्ययनका लागि कार्यकारिणी सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको यादवको कथन छ । कार्यकारिणी बैठकबाट विधान पारित भएपछि संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
यता, ठाकुर पक्ष कार्यकारिणी समिति बैठक शनिबार नै बबरमहलस्थित मधेस भवनमा बसेको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था’bout छलफल भएको एक नेताले बताए । कार्यकारिणी समितिमा आफूहरू अल्पमतमा परेपछि अगामी रणनीति तय गर्न छलफल भएको स्रोत बताउँछ ।
ठाकुर समूह एकताबद्ध गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा यादव समूहले चासो नदिएको आरोप लगाएको छ । यादवको पार्टी फुटनैलाग्दा रातारात एकता गरेर जोगाइदिए पनि अहिले यादवले छुट्टै अघि बढ्न खोजेको आरोप ठाकुर समूह नेताले लगाएका छन् ।
महिलामाथि यौनजन्य दुव्र्यवहारविरुद्धका कानुनी पाटा
अध्यक्ष यादवले नयाँ मन्त्रीमा को–कसको नाम सिफारिस गरे
भारतद्वारा ७५ एम्बुलेन्स र १७ वटा बस प्रदान
२१औं शताब्दीमा योगको सान्दर्भिकता
रोल्पामा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुई दाजुभाइको मृत्यु
जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल संगीत तथा नाट्य राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कारबाट ६ स्रष्टा पुरस्कृत
विभागका महानिर्देशक पौडेलको छोटो समयमै सरुवा
एकैदिन १५५९ जनामा कोरोना पुष्टि, १०५७ जना डिस्चार्ज
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह
प्रशासनमा तार्किक र जुझारु नेतृत्व
नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तल्लिन छ : डिआईजी कार्की
जापानमा एकै दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै एकैदिनमा ३ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित
सर्लाहीकाे हरिवनमा राेकिराखेकाे ट्याक्टरमा बस ठाेक्कियाे, दुई दर्जन यात्रु घाइते
दूध बोक्ने गाडीको ठक्करबाट मृत्यु